काठमाडौं । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै उपप्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गर्यो भने त्यो सरकारप्रति आमनागरिकको आशा र भरोसा कस्तो होला ? पक्कै पनि, सरकारप्रति जनताको आशामा कालो ग्रहण लाग्छ । अहिले यस्तै नियतिको टिप्पणी शुरु हुन थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक दिएर उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पोखरेलप्रति नै विश्वास नरहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
कार्यवाहक दिनु भनेको आफ्नो अनुपस्थितिमा बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिनका लागि हो । विगतमा प्रधानमन्त्री बाहिर हुँदाहँुदै आएको अभ्यास पनि यही नै हो । तर यसपटक उपचारका लागि केही लामो समयका लागि सिंगापुर रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरबाटै भिडियो कन्फेरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन गरेपछि यसलाई उपप्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको रूपमा टिप्पणी गर्न थालिएको छ । भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरिएको बैठकको अध्यक्षता पनि प्रधानमन्त्री आफंैले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री आफैंले अध्यक्षता गरेपछि केको कार्यवाहक ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले एउटा थप पछुवा हल्लाउनुबाहेक पोखरेलको अरू कुनै थप भूमिका नभएको बताइन्छ ।
त्यसो त मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेन्डाबारे मन्त्रीहरूलाई ४८ घण्टाअगाडि नै जानकारी गराइएको हुन्छ । ती ऐजेन्डा प्रधानमन्त्रीकै स्वीकृतिमा तयार गरिएका हुन्छन् । एजेडाहरू पहिले मन्त्रीलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो, अहिले ल्यापटपमै उपलब्ध हुन्छ । कतिपय मन्त्रीले त बैठककै दिन ल्यापटप खोलेर एजेन्डा पढ्छन् । र, ती एजेन्डामा के निर्णय हुन्छ भन्ने पनि पहिल्यै संकेत गरिसकिएको हुन्छ । यसको अर्थ, एजेन्डा छनोट गर्नेदेखि निर्णय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाटै हुन्छन् । सबै काम प्रधानमन्त्रीबाट हुने भएपछि कार्यवाहकको कामचाहिँ के रहेछ ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।